Gudiga Dib u diska Hospitalka Galkacayo – Puntland Post
Gudiga Dib u diska Hospitalka Galkacayo
Tel: Mobile: 0907795005, 090791355, 0907795529 – Email:gdhospitalka@gmail.com
Dhammaan dadweynaha reer Puntland iyo kan Soomaaliyeed waxaa lagu wargalinayaa in la bilaabay dib u dhiska Hospitalka guud ee Magaalada Galkacyo, kaa soo ku burbur weyn kasoo gaaray qaraxii ka dhacay Magaalada Galkacyo waxaana burburay qaybo badan oo ka mid ah Hospitalka.
Waxaa lasameeyay gudiga dib u dhiska Hopsitka Galkacayo oo ah gudi madaxbanaan kana kooban 19 xubnood ayna ka mid yihiin Isimo, Culumo, Aqoonyahano, Ganacsato xushmad ku dhexleh Bulshada iyo Xubno ka socda Maamulka Dowladda.
Guddigu shaqadiisu waa dib u dhiska Hostalka guud ee Galkacyo, loona qorsheeyay inuu noqdo mid cusub oo casri ah waxuuna Guddigu aruurinayaa dhaqaalaha iyo tubaracaadka dad waynaha khayrka jecel dal iyo dibad.
Gudigu wuxuu ku baraarujinayaa dad waynaha reer Puntland iyo kan Soomaaliyeed in howshaas ay kawada qayb qaataan Maal, Muruq iyo Maskaxba si loo helo Hospital casri ah oo daboola dhammaan baahiyaha Caafimaad.
Hadaba Dhamaanteen aanu ka qaybqaadano dib u dhiska Hospitalka guud ee Galkacyo.
Amal Bank :- 1011914967
Dahabshiil Bank:- GLKD002475
Tawakal Express Bank:- acc# Glka4399192
Iftin Bank :-384488
Sahal Account:- 463406
Sahal Number:- 0906791977
Gudiga Dib u dhiska Hospitalka Guud ee Galkacayo
Tel:- 0907795005, 0907791355, 0907795529